Waa maxay Aaladda Robotic Automation? | Martech Zone
Jimce, Maarso 29, 2019 Jimce, Maarso 29, 2019 Douglas Karr
Mid ka mid ah macaamiisha aan la shaqeynayo ayaa ii soo bandhigtay warshad soo jiidasho leh oo laga yaabo in suuqyeyaal badani aysan xitaa ka warqabin inay jiraan. Daraasaddooda Is-beddelka Goob-Shaqada waxaa wakiishay Farsamada DXC, Futurum wuxuu leeyahay:
RPA (automation process robotic) waxaa laga yaabaa inaysan ku jirin safka hore ee buun-buuninta warbaahinta sidii markii hore ahayd laakiin tiknoolijiyadaani waxay si aamusnaan ah oo wax ku ool ah ugu shaqeyneysaa teknolojiyadeeda iyo waaxda IT-da maadaama qeybaha ganacsigu ay eegaan inay automated howlaha soo noqnoqda, yareeyaan kharashyada, kordhiyaan saxnaanta iyo hanti dhowrka, iyo dib u xoojinta hibada aadanaha ee howlaha heerarka sare.
Goobta Shaqada iyo Isbedelka Dijital ah
9 aragtiyo muhiim ah oo saameynaya mustaqbalka shaqada
Dhinaciisa, Aaladda Robotic Automation (RPA) waa softiweer ay dhex gasho softiweer si ay uga dhigto mid waxtar badan. Sida aan wada ogsoonahay, iskudhafka tikniyoolajiyadda shirkaduhu waxay sii wadaan inay sii fidaan waxayna leeyihiin habeyn horudhac ah, ka-hordhac ah, lahaansho, iyo nidaamyo dhinac saddexaad ah iyo habab.
Shirkaduhu waxay la halgamayaan inay dhexgalaan dhuftoyada, badiyaa ma awoodaan inay la socdaan horumarka joogtada ah. Barnaamijka RPA ayaa buuxinaya farqigaas aadka loogu baahnaa. Barnaamijka 'RPA software' badanaa waa mid hooseeya ama xitaa astaamo aan lahayn nambarka oo bixiya interface interface fudud si loo dhiso isdhexgalka isticmaalaha macaamiisha ama howlaha kicinta. Marka, haddii ERP-gaagu yahay SAP, Suuqgeyntaada Suuq geynta waa Salesforce, dhaqaalahaaga wuxuu ku yaal Oracle, waxaadna leedahay darsinno kale oo platforms xal RPA ah ayaa si dhakhso leh loo geyn karaa si loogu wada daro dhammaantood.
U fiirso taada Nidaamyada Iibka iyo Suuqgeynta. Shaqaalahaagu ma ku galayaan macluumaadka soo noqnoqda shaashado badan ama nidaamyo kala duwan? Shaqaalahaagu miyey si isdaba joog ah xogta uga wareejinayaan hal nidaam una wareejinayaan mid kale? Ururada badankood waa… waana halka ay RPA ku leedahay Soo-Celinta Maalgashiga ee cajiibka ah.
Adoo hagaajinaya isdhexgalka isticmaaleyaasha iyo yaraynta arrimaha soo gelinta xogta, shaqaaluhu way fududdahay in la tababaro, way ka niyad yar yihiin, fulinta macaamiisha ayaa ka saxsan, waxaa jira hoos u dhac ku yimaada dhibaatooyinka dhinaca hoose, iyo guud ahaan faa'iidada ayaa la kordhiyay. Iyadoo cusbooneysiinta qiimaha-waqtiga dhabta ah ee nidaamka oo dhan, shirkadaha ecommerce waxay sidoo kale arkayaan koror aad u sarreeya oo dakhli ah.
Waxaa jira habab dhexe oo wax laga beddeli karo RPA:
Ka soo qayb galay - nidaamku wuxuu ka jawaab celiyaa la macaamilka isticmaale. Tusaale ahaan, Clear Software wuxuu leeyahay macmiil leh 23 shaashadood oo ERP ah oo ay awoodeen inay ku burburaan hal interface oo isticmaale ah. Tani waxay yareysay waqtigii tababarka, waxay hagaajisay xog aruurinta, waxayna yareysey tirada khaladaadka (oo aan lagu xusin jahwareerka) ee adeegsadayaasha markay macluumaadka gelayaan.
Ilaalin la'aan - nidaamku wuxuu kiciyaa cusbooneysiinta la xiriirta nidaamyo badan. Tusaale waxaa lagu dari karaa macmiil cusub. Halkii lagu dari lahaa diiwaanka dhaqaalahooda, ecommerce, fulintooda, iyo nidaamkooda suuqgeynta PA RPA waxay qaadataa oo shaandheeysaa waxna ka bedeshaa xogta sida loogu baahan yahay waxayna si toos ah u cusbooneysiisaa dhammaan nidaamyada waqtiga-dhabta ah.
Xeelad - RPA, sida tiknoolajiyad kasta oo kale, hadda waxay ku darsameysaa sirdoon si ay ula socoto oo ay si otomaatig ah u gayso bots si ay ugu fiicnaato geeddi-socodka hay'adda oo dhan.
Qaar ka mid ah nidaamyada hore ee dugsiga 'RPA' waxay ku tiirsan yihiin shaashadda iyo shaashadaha shaashadda gacanta. Nidaamyada cusub ee 'RPA' waxay adeegsadeen iskudhaf wax soo saar leh oo ay wadaan API-da si markaa isbeddelada kuhaboonaanta adeegsaduhu aysan u jabin isdhexgalka.
Hirgelinta RPA waxay leedahay caqabado. Macaamilkeyga, Clear Software, wuxuu qoray dulmar guud oo ku saabsan RPA iyo sida looga fogaado dhibaatooyinka ku dhaca fulinta RPA.
Soo Degso Hab Wanaagsan oo RPA ah
Tags: APIqalabayntasoftware cadCRMdxcfuturumdhexgalkajon gilmanOraclesi lacag loo heloOTCotomaatiga nidaamka robotkarpaiibindheecaankhibrada isticmaalahainterface interface